ပြန်ဖွင့် / Porn အသုံးပြုမှုအမေးအဖြေများ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ reboot / porn use FAQ စာမျက်နှာကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ပြန်လည်ဖြေကြားသူများသည်မှတ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသုတေသနနှင့်အတူတစ်ခါတစ်ရံပါ ၀ င်လေ့ရှိသည့်ပြန်လည်ထူထောင်သူများအသုံးပြုသောနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ဖူးသောဥာဏ်ပညာအပေါ်အခြေခံသည်။ မေးခွန်းအများစုတွင်လင့်ခ်များစွာရှိသည်။
သငျသညျ porn စွဲနောက်ကွယ်မှအခြေခံယန္တယားနှင့်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာကိုကြည့်ပါလျှင် အင်တာနက်က Porn အတွက်ဦးနှောက်ထင်သလောက်ဘယ်လို: Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် နှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ။
သိပ္ပံပညာအပေါ်အသေးစိတ်ဖတ် သော့ချက်သဘောတရားများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ဒီမှာ Start နှင့် လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာဒါမှမဟုတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု ဆောင်းပါးများ အပိုင်း။ ဒီ ၁၈ မိနစ်ကြာသောဗီဒီယိုသည်သာမန်ဒဏ္andာရီများနှင့်ဝါဒဖြန့်ချိမှုများကိုဖြေရှင်းသည်။ PORN ဒဏ္THာရီများ - Gabe Deem ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရား
ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ED, DE, အနိမ့်လိင်စိတ်) ဖြစ်ပါသလား
သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ED ရောဂါခံစားနေရတဲ့လူငယ် (ကောင်းမကောင်းကို) ဘာပြောကြသလဲ။
ပြန်ဖွင့်အခြေခံ (ကို restart အခြေခံစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ)
အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်အများဆုံးအလုပ်အတွက် tapering မထားဘူး?
porn ပိုဆိုးငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ယုံကြည်မှု / စိတ်ကျရောဂါ / စိုးရိမ်ပူပန်မှု / OCD / စိတ်ကြွအောင်သလဲ?
အော်ဂဇင်, abstinence နှင့်အသွေး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမဆိုကွန်နက်ရှင်?
ကူညီပါ! ငါ porn ဖြတ်သော်လည်းငါ့အာနိသင်, လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ်ကို (Flatline) လျော့ကျလာနေကြတယ်
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ်ငယ်ရွယ် Started နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
“ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု” ဆိုတာဘာလဲ။
'အပြာရောင်ဘောလုံး' သို့မဟုတ် 'ချစ်သူများ' အခွံမာများကောမည်သို့နည်း။
ငါငါ့အလိုရှိသမျှ porn delete / မဖကျြဆီးကွရမညျနညျး
အဘယ်ကြောင့်ငါ porn တက်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒါဝမ်းနည်းခံစားနေပါတယ်?
ငါပြန်ရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ် relapse ၏အန္တရာယ်ဖြစ်၏။ (အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များ)
ငါ rebooting လုပ်နေတယ်။
Post-စူးရှဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ (ယက်) porn စွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ပါသလား?
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက် Tools များ
အင်တာနက် Porn စွဲမှုနှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းများ
ဦးနှောက်မှ porn စွဲအကြောင်းမရှိနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါသလား
အလွန်အကျွံအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာကဘာတွေလဲ?
အဘယ်ကြောင့် porn တွေကိုဆဲအလုအယက် (ထိခိုက်လွယ်) ဖြစ်ပေါ်သလဲ?
လိင်မှုကိစ္စသည်အမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ကြီးမားသောပြproblemနာလား။ porn & ကျူးကျော်ကော?
တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု (သည်းခံစိတ်)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်
ငါဘယ်လိုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate သလဲ?
အလေးသာမှု & အဆုံး:
ကလေးတွေ porn နှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းကိုသင့်သလဲ
ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ / အိမ်ထောင်ဖက်များထက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားသနည်း။
အဘယ်အရာကိုတင်းကျပ်စွာယောက်ျားသို့မဟုတ် phimosis ကော?
porn ကြောင့်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မည်သည့်ကျား, မဖက် (အမျိုးသမီး) ကကျေနပ်မှုမရနိုငျ
PIED ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေဖြင့်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု” နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
“ chaser” ဆိုတာဘာလဲ။